Ercefuryl (အာစီဖျူရယ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ercefuryl (အာစီဖျူရယ်)
Ercefuryl (အာစီဖျူရယ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ercefuryl (အာစီဖျူရယ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ercefuryl ကို မည့်သည့်အကြောင်းအရာများ အတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Ercefuryl ဆိုတာဟာ Ercefuryl ပြင်းအား ၂၀၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်သော ဆေးတောင့်ဖြစ်ပြီး ကူးစက်ရောဂါပိုးမွှားများကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရုတ်တရက် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရာမှာ အများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်။
Ercefuryl ကို ဘယ်လိုသောက်သုံး သင့်ပါသလဲ။
Ercefuryl ကို သောက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သောက်သုံးရာမှာ
သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးပမာဏနှင့် အချိန်အတိုင်း သောက်သုံးပါ။
Ercefuryl ကို မသောက်သုံးခင် အသားအမှတ်တံဆိပ်ကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။
ဆေးအသုံးပြုပုံနှင့် အသားအမှတ်တံဆိပ် အကြောင်းကို ဆက်လက်သိရှိလိုပါက သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ercefuryl ကို ဘယ်လို သိုလှောင်သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
Ercefuryl ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Ercefuryl ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Ercefuryl ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Ercefuryl ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ercefuryl ကို မသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Ercefuryl ကို မသောက်သုံးခင်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များရှိရင် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်ကို ပြောပြထားပါ။
Ercefuryl ပါဝင်သောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ခြင်း (အချက်အလက် အတိအကျကို ဆေးညွှန်းထဲမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
Ercefuryl နှင့် ဓါတုဓါတ်ပြုနိုင်သော ရောဂါများနှင့် ဆေးဝါးများ (ဥပမာ – Fructose နှင့် မတည့်ခြင်း၊ Glucose-galactose တို့ကို မစုပ်ယူနိုင်ခြင်း (သို့) Sucrase-isomaltase ဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Ercefuryl ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သောက်သုံးလို့မရပါ။ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ ဒီဆေးကို အနည်းငယ်မျှ သောက်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Ercefuryl ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ercefuryl က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်သလဲ။
အခြားသောဆေးဝါးများလိုပဲ Ercefuryl ကို သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အများစုသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ ဖြစ်ပွားမှု လွန်စွာနည်းပါးပြီး ကုသမှုခံယူရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကယ်လို့ဆေးသောက်ပြီးချိန် တစ်စုံတစ်ရာ ပြသာနာ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကတော့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထွက်ခြင်း၊ Angio-odema ခေါ် ရုတ်တရက် ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓါ အစိတ်အပိုင်းအချို့ရောင်ရမ်းခြင်း (အများအားဖြင့် မျက်နှာ၊ လျှာနှင့် လည်ပင်းများမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။) (သို့) ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် သတိလစ်မေ့မျောခြင်း တို့ အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Ercefuryl နဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။
Ercefuryl ဟာ သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Ercefuryl နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Ercefuryl က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် (သို့) အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Ercefuryl နဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ရှိသလဲ။
Ercefuryl ဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Ercefuryl ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Ercefuryl ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုသည်များကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ပေးလေ့ပေးထ ရှိတဲ့ ဆေးအချိုးအစားကတော့ ဆေး နှစ်တောင့် ကို တစ်နေ့၄ ကြိမ် (၈၀၀ မီလီဂရမ်) ကို အများဆုံး ၇ ရက် ထိသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Ercefuryl ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသက် ၆ နှစ်နှင့် အထက် ကလေးငယ်များအတွက် ပေးလေ့ပေးထရှိတဲ့ ဆေးအချိုးအစားကတော့ တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ် (တစ်နေ့ကို ၆၀၀ မှ ၈၀၀ မီလီဂရမ်) ကို အများဆုံး၇ ရက်ထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၆ နှစ် အောက် ကလေးလူနာများအတွက် သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားကို အလုံအလောက် သုတေသနပြုထားခြင်း မရှိပါ။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ မသုံးစွဲခင်မှာ ဆေးရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ercefuryl ကို ဘယ်လိုပုံစံအချိုးအစားတွေနဲ့ ရရှိနိုင်သလဲ။
Ercefuryl ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့်ပုံစံ ပြင်းအား ၂၀၀ မီလီဂရမ်
Ercefuryl ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Ercefuryl. https://www.moncoinsante.co.uk/ercefuryl-Ercefuryl-200-mg-sanofi-aventis-boite-de-12-gelules.html. Accessed October 20, 2016
Ercefuryl. https://www.drugs.com/international/endiex.html. Accessed October 20, 2016.
Ercefuryl. http://pharmacybook.net/Ercefuryl/. Accessed October 20, 2016.